IBhakabhaka liyayivuma induku | isiZulu
IBhakabhaka liyayivuma induku
Asiyisabi iPirates - Maluti FET
Bahlukene phakathi ngoJohnson - Imibono yabafundi
Angeke adlale uNtshumayelo
Johannesburg - Ngemuva kokuthelwa ngehlazo lokushaywa ngo 4-1, yiqembu elingaziwa iMaluti FET College, koweNedbank Cup, i-Orlando Pirates isivume induku yathi kumele "yenyuse amasokisi".
Umbiko weKickOff uthi umqeqeshi uRoger de Sa ushiye ngaphandle abadlali abayizethenjwa yadlalisa uBheki Nzunga, Ayanda Gcaba, Lehlogonolo Maselesa, Onyekachi Okonkwo kanye noRudolf Bester, nokuyinto engalisizanga neze iqembu njengoba ligcine ngokuthi likhishwe kweyeNedbank.
Unozinti weBhakabhaka uSenzo Meyiwa uthi iqembu lifunde isifundo esibuhlungu, kwathi u-Oupa Manyisa okunguye oshaye elokubika, wathi abadlali bebengenako ukuzimisela okuphelele.
“Ukudlala kweqembu kushiye imibuzo eminingi ekumele abadlali baziphendule yona. Kumele kushintshe ukwenza uma iqembu selidlala neMoroka Swallows ngoLwesibili,” kusho isitatimende seqembu ku-website yalo.
“Akwanele ukuthi kugcine ngokuthi kuthiwe iqembu belingazimisele lidlala neMaluti. Oshampeni bendebe ka-2010 bahlulwe yiqembu elingekho neze ezingeni labo."
Kumanje ezikaMagebhula zilele isibili kwiligi yePremiership, ngemuva kweKaizer Chiefs ephambili ngomdlalo owodwa.